Macdanta Cryptocurrencies iyo Bitcoins ee daruuraha - Samee Lacag Macdan | Wararka Gadget
Michael Gaton | | Criptomonedas, Software, Tiknoolaji
Haddii aad xiiseyneyso maalgalinta sheyga loo yaqaan cryptocurrencies oo aadan rabin inaad lacag ku bixiso iibso Bitcoins, Ethereum ama lacagaha kale ee tooska ah, markaa ikhtiyaar aad u xiiso badan ayaa ah macdanta. The macdanta cryptocurrency Waa nidaamka baahinta ee macaamilku ku ansaxinayo xannibaadda; Laakiin si fiican looga fahmo qaab fudud waxa ay ka kooban tahay, waxaan dhihi karnaa waa nidaam uu kumbuyuutar ugu hibeeyo taxane ah ilaha xisaabinta isla markaana taa bedelkeeda lagu helo lacag bixinta kripto. Haddii aad rabto inaad aragto sida loo qodo shilimaadka qaab faa'iido leh iyo daruurta, ka dibna sii wad aqrinta maqaalkan.
1 Macdanta Cryptocurrency, xoogaa taariikh ah
2 Qodista daruuraha
3 HashFlare, bitcoins-kayga daruurta dhexdeeda
4 Sidee loo sameeyaa cryptocurrencies Hashflare?
Macdanta Cryptocurrency, xoogaa taariikh ah
Sanado ka hor way suurto gashay macdanta Bitcoins ama waxyaabaha kale ee loo yaqaan 'cryptocurrencies' oo ah qaab fudud oo guriga looga yimaado iyo maalgashi yar oo heer hardware ah. Kumbuyuutar kasta wuxuu awood u lahaa inuu macdanta ku qodo qaab faa'iido leh sidaa darteedna dadka qaarkiis waxay go'aansadeen inay maal-gashadaan mashiinno macdan looga soo saaro guriga si ka badan ama ka yar hiwaayadda. Waqtigan xaadirka ah tani mar dambe macquul maahan, muuqaalka qalab si gaar ah loogu talagalay macdanta lacagta qadaadiicda ah oo ay weheliso dhibaatada sii kordheysa ee algorithm-ka macdanta ayaa ka dhigaysa mid aan faa'iido u lahayn aniga sidaan maanta - ugu yaraan lacagaha ugu badan sida Bitcoin, Ether, ... - iyo in suuqa ay ku badan yihiin shirkado waaweyn oo ay ku dadaalaan kheyraad aad u badan oo hawshan ku saabsan.
Kaliya ma lihin qodobka go'aaminaya qiimaha qalabka, waxaan sidoo kale leenahay xaddidaado kale sida:
El Dhibaatada kordhay: dhibaatada dhiraynta macdanta Bitcoins waxay kordheysaa bilba bil kadib sidaa awgeed waxaa sii kordheysa lagama maarmaanka in la helo awood xisaabeed dheeri ah si loo helo macdan qodista Bitcoins.
El kharashka tamarta: qadaadiicda macdanta ayaa ah geedi socod aad u cuna koronto badan, waana sababta ay uga macaash badan tahay wadamadaas oo koronto badan laga helo, sida Shiinaha, Iceland, iwm.
La heerkulka deegaanka: processor-ku wuxuu soo daayaa kuleyl aad u tiro badan inta ay qodanayaan waxaanan u baahanahay inaan kala qaadno kuleylkaas; sidaa darteed macdanta wadamada cimilada qabow iyana waxay yareysaa qarashka.
Sababahan awgood - iyo kuwa kaleba - maanta qayb weyn oo ka mid ah macdanta cryptocurrency ayaa laga fuliyaa dalal ay ka mid yihiin Shiinaha, Iceland, Finland, iwm.
Sidaan horeyba uga faallaynay, macdanta cryptocurrencies si toos ah uga timaada guriga faa'iido ma leh haddadaan. Hagaag, dhab ahaan, waxay noqon kartaa mid faa iido leh inta aan raadineyno kuwa dhawaanta la abuuray ee loo yaqaan 'cryptocurrencies' oo aan wax badan laga aqoon oo wali u oggolaanaya macdanta qalabka daciifka ah, laakiin taasi waa arrin kale oo aan ku siin lahaa maqaal kale oo aad u ballaaran. Xaaladdan oo kale waxaan ka hadleynaa macdanta Cryptos-ka ugu weyn iyo in hadda laga bilaabo guriga aan macquul ahayn.
Marka anigu ma samayn karo lacag qodista Bitcoins mar dambe? Hagaag jawaabtu waa haa, mahadsanid waxa loo yaqaan daruuraha macdanta o macdan qodista. Fikradda ayaa ah in shirkado dhawaan ay soo if baxeen oo dejinaya nidaamyo waaweyn oo lagu qodo qadaadiic wadamo iyo qalab gaar ah, lagana dhigo kuwo faa iido leh, shirkadahani waxay ku siinayaan fursad aad ku shaqaaleeyaan adeegyadooda si aad miinadaada meel fog uga hesho Sidan ayaad ku heli kartaa nidaamkaaga macdanta Bitcoins waxaadna bixin doontaa oo keliya lacag, adiga oo iska ilaalinaya inaad qalabka toos u maamusho.
Waqtigaan la joogo waxaa jira dhowr shirkadood oo bixiya adeegyadan laakiin waa inaad ka taxaddartaa markaad mid dooraneyso maxaa yeelay waxaa jira kiisas qaar ka mid ah shirkado khiyaano ku kacay oo, ka dib markii uu socday qorshe haramka, inay khiyaameeyeen macaamiishooda. Anaga waxaan kugula talineynaa Hashflare, taas oo ah shirkad si fiican u shaqeynaysay dhowr sano oo cadeyneysa inay tahay shirkad ay ka mid tahay waad aamini kartaa iyo waxa macaashka daruurta sare Ka imanaya suuqa.
HashFlare, bitcoins-kayga daruurta dhexdeeda
hashflare waa a nidaamka macdanta daruurta kuwaas oo bixiya nidaam macdan qodis leh oo lagu rakibay Iceland, laguna gaarayo faa'iido sare iyadoo ay ugu wacan tahay qiimaha hooseeya ee tamarta ee Iceland iyo jawiga qabow ee u oggolaanaya inay keydiyaan kharashyo badan markay kala diraan kuleylka qalabka macdanta. Waxay hadda u oggolaadaan macdanta Bitcoins, Ethereum, Litecoins iyo Dash.
Ma rabtaa inaad miino Bitcoins?
Riix HALKAN si aad u qodato Bitcoins
Sidee loo sameeyaa cryptocurrencies Hashflare?
In kasta oo ay umuuqato mid isku qasan, qadaadiic macdanta leh Hashflare waa mid aad u fudud. Kaliya waa inaad raacdaa talaabooyinka soo socda:
1.- Halkan guji oo iska qor HashFlare
2.- Markaad gudaha gasho waa inaad iibso nidaamka macdanta. Halkan waxaad ku haysaa algorithms badan oo kala duwan oo ah mid ama mid kale oo loo yaqaan 'cryptocurrency'. Qaarkood way ka faa'iido badan yihiin kuwa kale, laakiin waxaan kugula talineynaa inaad adiga iibso algorithm-ka SHA-256 iyo macdanta Bitcoins.
3.- Xulo tirada maxaad rabtaa inaad ku maal gashato dollar. Waad ka qodan kartaa $ 1,5 illaa xaddi ka sarreeya oo ah $ 15.000. Halkan waxay kuxirantahay midkasta kheyraadkiisa iyo inta aad rabto inaad maal gashato macdanta.
4.- Samee lacagta. Waxaad ku bixin kartaa Bitcoins laakiin haddii aad tahay isticmaale aan horumarsaneyn oo ku saabsan cryptocurrencies waxaad sidoo kale si toos ah ugu sameyn kartaa habab dhaqameed badan sida wareejinta bangiga ama kaarka deynta. Haddii aad isticmaasho kaarka amaahda, waa inaad dib u ansaxisaa lacag bixinta goor dambe adoo tilmaamaya koodh ku jira lacagtaada kaadhka, markaa waxay qaadan kartaa maalmo.
Waana intaas, waxaad bilaabi kartaa macdanta Bitcoins iyo bil kasbato lacag adigoon wax kale qaban.
Qeybtaada HashFlare waxaad kuheysaa macluumaad meesha aad wax ka arki karto dakhliga soo gala maalinba maalinta ka dambeysa, Saadaasha dakhliga ee 1 maalin, 1 usbuuc, 1 bil, 6 bilood iyo 1 sano si aad u aragto sida faa'iidada leh maalgashigaagu.
Markaad ku ururiso Bitcoins koontadaada waxaad sameyn kartaa:
Si otomaatig ah dib ugu maalgeli ayaa yiri bitcoins iibsashada awood badan oo macdanta Hashflare si koritaanka maalgashigaagu u noqdo mid jibbaar ah.
Ku dhaaf Bitcoins-kan jeebkaaga halkaas oo aad ku keydin karto ama u badal euro ama doolar halkaasna ka gey bangigaaga.
Sidaad arki karto, macdanta 'cryptocurrencies' ee daruuraha waa geedi socod toosan oo toos ah. Thanks to dhufto ee sida Hashflare waxaad ku maal gashan kartaa $ 1,5 oo aad bilawdo macdanta adigoon qaadin dhibaatooyin adag sida inaad iibsato qalab khaas ah, dejinta nidaamyada, rakibida algorithm macdanta, ... waxaas oo dhan waxaa sameeya adiga hashflare adiga. Kaliya waa inaad go'aansataa inta aad maal gashanayso, iibso awooda macdanta waana intaas. HashFlare ayaa mas'uul ka ah sameynta faa'iidadaada ugu fiican, si aad u bilowdo inaad la shaqeyso iyaga xusuusnow taas kaliya waa inaad gujisaa halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » Macdanta Cryptocurrency, soo hel sida lacag looga sameeyo macdanta daruuraha
Maqaal aad u masuuliyad daro badan. Mala-awaal aan wax soo saar lahayn, iyo wixii ka sareeya oo leh cryptocurrencies oo madmadow ku jiro qasnadda. Ka habboon Maafiyada marka loo eego shakhsiyaadka masuulka ka ah
Jawaab Jose Luis Ureña Alexiades
War gadget dijo
Waad salaaman tahay Jose Luis Ureña Alexiades. Waan ka xumahay inaadan jeclayn qodobka, waa run in lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' ay yihiin maalgashi khatar ah waana taas sida ay tahay in loo qaato (macdanta qatarta xoogaa way ka hooseysaa maxaa yeelay sida iska cad sidoo kale way jirtaa) Taasi haa, ma aaminsani inay suuq u tahay maafiyada; Waxaa laga yaabaa inay jiraan kooxo burcad ah oo ku lug leh qaybta sababo la xiriira faa'iidooyinka qarsoodiga ah ee ay bixiso laakiin sidoo kale waxaa jira qayb ku wareegsan adduunka xannibaadda oo ka kooban dad aad u caadi ah. Blockchain wuxuu sameyn doonaa talaabo ka socota "internet-ka macluumaadka" ilaa "internet-ka qiimaha" hadii hadii la xaqiijiyo kartidiisa, waxaa macquul ah inaan la kulanno isbedel la mid ah kacaan ahaan sida imaanshaha internetka loola jeeday. Salaan iyo mahadsanid akhriskaaga
Jawaab ku saabsan Qalabka Qalabka
Dowladaha iyo bangiyada isku si ayey u fikiraan, canshuuraha iyo guddiyada waa soo noqnoqdaan waxayna ku jiraan macaamil ganacsi oo dhexdooda ah Bangiyada iyo Dowladaha gadaashiisa dhabarka macmiilka bangiga oo aan ogeyn ama aan haysan sharaxaad sababta ay uga qaadaan guddiyo aad u fara badan xawaaladaha. Cryptocurrency waa mid beddel ah oo sii kordheysa waxtarna leh adduunkuna kama fogaan karo.
Cumar Valfre dijo
José wuxuu u baahan yahay inuu waxbadan aqriyo
Ku jawaab Cumar Valfre
Marka shirkadahaani, halkii ay iyagu iska qodan lahaayeen oo ay taajiri lahaayeen, ma waxay kaa iibinayaan macdan si aad u taajirto? Dabcan, dabcan. Tani waxay la mid tahay kuwa kaa iibinaya koorsooyinka / buugaagta si aad ugu taajirto maalgashiga suuqa saamiyada XD
Jawaab Oscar López
Hagaag, dhabtiina waxay digaagaan dameer bil waliba. Waxa dhacaya ayaa ah in macdanta ka sokow waxay kuu fidinayaan inaad kireysato qalabkooda si aad wax uga qodato.
Waxaan u arkaa inay tahay wado lagu kala duwo dakhligooda,% macdanta iyo% kale oo qalabka lagu kireeyo.
Jawaab Miguel Gaton
Waxoogaa shaki ah ayaan ka qabaa madal aan qoraalka igu caddeyn. Ma iijawaabi kartaa Mahadsanid:
1.- Awoodda aad kiraysato, imisa ayey soo saartaa? Ma ogaan kartaa ka hor intaadan iibsan?
2.- Miyay lagama maarmaan tahay in la helo jeeb internet ama offline ah si aad awood ugu yeelatid inaad kala baxdo waxyaabahaaga yaryar?
3.- Maxaa ka badan oo lagula taliyaa, mid offline ama mid khadka tooska ah?
Mahadsanid iyo mahadsanid, Antonio
1.- Qeybta Hashflare lafteeda, waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku ekeysiiso waxa aad soo saarto maalin kasta awood kasta oo qandaraas leh.
2.- Haa, waxaad u baahan tahay inaad haysato boorsada bitcoin si aad ugala baxdo waxa soo baxa. Haddii aad qodato Eter waxaad u baahan doontaa boorsada Ether.
3.- Heerka nabadgelyada, khadka tooska ah ayaa aad uga badbaado badan laakiin sidoo kale waxaa aad u dhib badan maamulkiisa Ugu dambeyntiina, mid ama mid kale ayaan go'aan ka gaari lahaa iyada oo ku saleysan maalgashigaaga. Haddii aad sameyn doontid maalgashi hooseeya markaa waxaan u maleynayaa in mid jireed uusan u qalmin, haddii aad maalgashanayso si weyn markaa haa.
Waad ku mahadsan tahay inaad ii jawaabtay Miguel.
Yuusuf Gonzalez dijo
Waad salaaman tahay, waxaan aqriyay maqaalkaaga ku saabsan macdanta 'cryptocurrency' ee daruuraha iyo HashFlare oo waxaan iibsanayaa SHA-256 algorithm iyo miinada Bitcoins ilaa aan ka cadeeyo, waxa aanan ka cadeyn waa $ 1,50 taasi waa waxa aan haysto ee maalin walba bixiya sanadkiiba hadaan qandaraas ka qaato. Aad baad u mahadsantahay jose
Jawaab Jose Gonzalez
Cadka iyo lafaha si dhakhso leh ayey u soo noolaan doonaan mahadnaqooda daaweynta cusub